Winter skin care tips (ဆောင်းရာသီအတွက် အရေပြားအကြံပြုချက်) | Moe Naymin
Winter skin care tips (ဆောင်းရာသီအတွက် အရေပြားအကြံပြုချက်)
၁။ ဆောင်းရာသီမှာ အဟာရလုံလုံလောက်လောက်ရအောင် စားသုံးပေးပါ။ အဲဒီအစားအစာထဲမှာ အသီးနဲ့ အသီးဖျော်ရည်များကို ထည့်သွင်းစားသုံးပေးပါ။
၂။ သင့်ရဲ့ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လက်၊ ခြေထောက်တွေကို အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အရာ တစ်ခုခုကို လိမ်းပေးပါ။
၃။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတာကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆောင်းရာသီမှာ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတာဟာ သင့်ရဲ့အရေပြားမှာရှိတဲ့ အစိုဓါတ်တွေကို စုပ်ယူလိုက်လို့ပါ။ ထို့အပြင် ရေအကြာကြီးချိုးတာကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
၄။ နှုတ်ခမ်းကို မကိုက်ပါနှင့်။ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ခြင်းဟာ နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်နှုတ်ခမ်းကွဲနေတယ်၊ ခြောက်နေတယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းလိမ်းဆီ တစ်ခုခုကို လိမ်းထားပေးပါ။ တံတွေးစွတ်ခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။
၅။ ဆောင်းရာသီမှာ အသားခြောက်တာကတော့ အဓိကပြဿနာပါပဲ။ သဘာဝပစ္စည်းများနှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ လိုးရှင်းများကို လိမ်းပေးပါ။
၆။ အ၀တ်အစားကို တတ်နိုင်သမျှ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါ။ အသားမပေါ်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ ဆောင်းရာသီလေက အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ကွဲအပ်စေလို့ပါပဲ။
၇။ အရက်ပါဝင်တဲ့ မိတ်ကပ်အမျိုးအစားတွေကို မသုံးပါနှင့်။ ဆောင်းရာသီမှာ ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလှကုန်တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါ။
၈။ သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ထောပတ်၊ အဆီ၊ ဂလစ်စထရင်းတို့က ထုတ်တဲ့ အသားအရေကို အစိုဓါတ်ပေးမယ့် အလှကုန်တွေကိုပဲ သုံးပါ။ ဓါတုပစ္စည်းပါတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။
၉။ ဗီတာမင်အေ နှင့် မီတာမင် အီး ပါတဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးပေးပါ။
၁၀။ ရေ နဲ့ အသီးဖျော်ရည်များကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက်သောက်သုံးပေးပါ။
အသားအရေခြောက်ခြင်းက အိုမီဂါ ၃ ခြောက်သွေ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါပဲ။
သင်၏အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း၏ အခြေအနေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြသသော အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အရေပြားခြောက်နေသောအခါ တွန့်ကြေနေသောအခါများတွင် အိုမီဂါ ၃ သည် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ရေကို အလုံအလောက်သောက်ခြင်းအပြင် အိုမီဂါ ၃ ဖြည့်စွက်စားသောက်ခြင်းကလည်း သင့်အရေပြားအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အိုမီဂါ ၃ ဓါတ် လိုအပ်လားမလိုအပ်လားဆိုတာ သင်၏လက်ကိုကြည့်ကတည်းက သိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင့်လက်က ချောမွေ့ပြီးနူးညံ့နေလျှင် အိုမီဂါ ၃ ဓါတ်အလုံအလောက်ရရှိနေပြီး သင်၏လက်ဟာ ခြောက်သွေ့ပြီးအပ်ကွဲနေလျှင် သင်ဟာ အိုမီဂါ ၃ လိုအပ်နေပါသည်။ အိုမီဂါ ၃ သည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အရေပြားရှိ အဆီဓါတ်ကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး အရေပြားမှ ရေငွေ့ပြန်ချင်းမှ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အိုမီဂါ ၃ က သင်၏အသားအရေကို ကြည်လင်ရှင်းသန့်တောက်ပြောင်စေပါသည်။ အိုမီဂါ ၃ ဓါတ်ကို ဆောင်းရာသီတွင် ပုံမှန်ထက်ပို၍သောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုမီဂါ ၃အပြင် အခြားသောအစားအစာများကိုလည်း သင့်တင့်မျှတအောင် ပို၍စားသုံးသင့်ပါသည်။ အသားအရေကို လှပကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းအစားအစာများကို စားသုံးသင့်ပါသည်။
၁။ လက်ဆက်သန့်ရှင်းသော အသီးအရွက်များ
အနီရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ရှိသော အသီးအရွက်များသည် ကယ်လိုတင်းဓါတ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ထိုအစားအစာများကို များများနှင့်လုံလုံလောက်လောက်စားသုံးပါလျှင် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျပြီး မျက်နှာကို ကြည်လင်နေစေပါသည်။ စာရေးသူလေ့လာချက်အရ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်ရှိသော အဘွားကြီးသည်ပင်လျှင် ပုံမှန်နှင့်များများစားသုံးခြင်းဖြင့် မျက်နှာတွင် အရေးအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ ကဇော်ဖောက်ထားသော အရွက်များကိုစားခြင်း
အရေပြား၏ကျန်းမာရေးသည် အူကျန်းမာရေးနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကဇော်ဖောက်ထားသော အရွက်များသည် အူကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အူထဲတွင်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြု ဘတ်တီးရီးယားများ တိုးပွားခြင်းကို အားပေးပါသည်။ ထိုသို့အူတွင်းရှိ ဘတ်တီးရီးယားများကို ကျန်းမာစေခြင်းက အရေပြားရောဂါများဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွင်လည်း ဘတ်တီးရီးယားများက ၁ စင်တီမီတာပတ်လည်တွင် အကောင်ရေသန်းနှင့်ချီ၍ရှိနေပါသည်။ ထိုအကောင်များသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုသော ဘတ်တီးရီးယားများဖြစ်ပြီး အရေပြား၏ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင်၏လက်တံတောင်ဆစ်တွင်ရှိသော ဘတ်တီးရီးယားပိုးများသည် လက်တံတောင်ဆစ်ကို ချောမွေ့အဆင်ပြေအောင် အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထိုကဇော်ဖောက်ထားသော အစာများ များများစားလျှင် သင်၏မျက်နှာတွင် ၀က်ခြံထွက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ထိုအစားအစာများကို ဆောင်းရာသီတွင် အထူးလျော့၍စားသုံးသင့်ပါသည်။ ထိုအစားအစာများကို ဆောင်းရာသီတွင် လုံးဝလျော့ချလိုက်လျင် သိသိသာသာပြောင်းလဲလှပလာမည်ကို တွေ့ရှိရပါမည်။
တတ်နိုင်သလောက် ခန္ဓာကိုအတွင်းရောအပြင်ပါ ရေဓါတ်ပြည့်ဝအောင် ပြုလုပ်၍ ယားယံခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။ နွေရာသီတွင် လူအများစုက ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့် ရေသောက်ဖို့ကို သတိထားမိကြပါတယ်။ သို့သော် ဆောင်းရာသီတွင် လူအများစု ရေများများသောက်ဖို့မေ့တတ်ကြပါသည်။ ပြင်ပရှိပတ်ဝန်းကျင်က စိုထိန်းခြင်းကြောင့် အရေပြားတွင်ရှိသောအစိုဓါတ်များကို အလွယ်တကူ လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေကို သင်၏ဆီးအရောင် အ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့လေးဖြစ်သည်အထိ သောက်ပါ။
ဆောင်းရာသီအတွက် ရေချိုးနည်း ၅ ဆင့်
၁။ သင်၏အရေပြားကို ရေနှင့်မထိခင် အရင်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ချင်းက ပျက်စီးနေသော အရေပြားများကို အလွယ်တကူစွန့်ထွက်သွားစေပါသည်။
၂။ ဆပ်ပြာအသုံးပြုချင်းကို တတ်နိုင်သလောက်လျော့ချပါ။ ဆပ်ပြာများများသုံးလေ သင်၏အရေပြားခြောက်လေလေ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သဘာဝနှင့်ပြုလုပ်ထားသော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သဘာဝမဟုတ်သော ပစ္စည်းများထက် ပို၍အသုံးပြုပေးပါ။
၄။ ရေပူနှင့်ရေမချိုးပါနှင့်။ တတ်နိုင်သလောက်ရေအေးနှင့်သာ ချိုးပါ။
၅။ ရေချိုးပြီးသောအခါတွင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သဘာဝထောပတ် (သို့) အလှဆီများလိမ်းပါ။
အုန်းဆီသည် သဘာဝလိမ်းသောအဆီများတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အုန်းဆီသည် အိုမင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အဓိက အလှဆီတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိအရေအကြောင်းများကို ချေဖျက်ပေးပါသည်။ အုန်းဆီကဲ့သို့အခြားသော အဆီများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြက်ဥတစ်လုံးကို ခွဲပြီး ခွက်လေးတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီး အ၀ါရောင်အနှစ်လေးများကို ဆွဲထုတ်ပြီးယူပါ။ ပြီးလျင် ပျားရည်လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်း၊ ပေါင်ဒါမုန့်လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းတို့နှင့်ရောပြီး မျက်နှာတွင် လိမ်းပါ။ ပြီးလျင်ရေဆေးချပါ။
ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ အဆီကို ဓါးနှင့်သေချာခြစ်ထုတ်ပြီး မျက်နှာပေါ်တွင်လိမ်းပါ။ ပြီးလျင်တစ်ကိုယ်လုံးတွင်လည်း လိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ချင်းက သင်၏အသားအရေကို နှုးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီး တင်းရင်းလှပစေပါသည်။
လီမွန်သီးသည် ဗီတာမင်စီဓါတ်အမြောက်အမြားပါဝင်ပြီး citric acid သည်ဆဲလ်အသစ်များကို ကွာကျစေပါသည်။ လီမွန်သည် အရေပြားတစ်ခုလုံးကို စိုပြေလှပစေပါသည်။ လီမွန်သီးအရည်ကို မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းတွင် သုတ်လိမ်းနိုင်းပါသည်။
လက်ဆက်သော ထောပတ်သီးတစ်ခုကိုယူပြီး ထိုထောပတ်သီးမှရသော အနှစ်ကို မျက်နှာနှင့်ခြောက်သွေ့နေသောအရေပြားပေါ်တွင် သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေဆေးချပါ။ အကယ်၍ သင့်အရေပြား အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့နေပါလျင် ထိုထောပတ်သီးအနှစ်ကို ပျားရည်တစ်ဇွန်းခန့်ရော၍ ခန္ဓာကိုယ်သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
သင်္ဘောသီးအမှည့်နှင့်ငှက်ပျောသီးကို သေချာရောပြီးမွှေပါ။ ပြီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
၇။ လက်ဆက်သော နွားနို့
နွားနို့ကို လူအများစုက သောက်သုံးရန်သာသုံးသော်လည်း နွားနို့ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့တွင်လည်း ၁၀မိနစ်ခန့် သုတ်လိမ်း၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥနီသည် ဗီတာမင်အေဓါတ်အမြောက်အများပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ဥနီအရည်ကို ဇွန်း ၂ ဇွန်း နှင့်အတူနွားနို့နှင့် အချိုးတူညီမျှအောင်မွှေ၍ ရောလိမ်းပါ။
အထက်ပါနည်းများအပြင် အလှဆီများနှင့် Astaxanthin ဓါတ်ပါဝင်သောလိုးရှင်းများကိုလည်း လိုအပ်လျှင် လိမ်း၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1.Try to take the necessary diet in the winter. Try to add the fruit and fruit juice to your diet.
2. Apply the petroleum jelly on the face, lips, hands, legs.
3.Do not take the hot water baths. The hot water takes out the moisture in the skin then skin becomes dry. So try to avoid the hot and long baths in winter.
4.The chapped lips are one of the problems in this winter. Apply the petroleum to the chapped lips. Use the lip scrubs for the lip care in the winter.
5.Dry skin is the major problem in the winter. Use the natural moisturizer in the winter.
6.Try to cover the most of the body with the clothes. Do not expose the skin to the cold air.
7.Do not apply the makeup products with high alcoholic content. Do not use the beauty and hair styling products too much in winter.
8.Use the natural moisturizers like butter, oils, glycerin etc in winter. Not to choose the chemical moisturizers.
9.Try to add the vitamin A, vitamin E rich foods in your diet.
10.Stay hydrated in the winter. Try to take the juices and drinks.
Nearly every one of them haveafatty acid deficiency.
1. Fresh vegetables: Ideally fresh, organic and locally grown. Fresh vegetable juice is also wonderful for your skin, as are carotenoids, which give red, orange and yellow fruits their color. Studies have shown that eating foods with these deeply colored pigments can actually make your face look healthier than being tanned. I’ve seen 75-year-old women in my practice that had virtually no facial wrinkles. Most of them were doing large amounts of juicing and led healthy lifestyles, which was one of the reasons why I started juicing
2. Fermented vegetables. Many don’t realize this, but the health and quality of your skin is strongly linked to the health of your gut. Fermented vegetables are ideal for promoting the growth of beneficial intestinal bacteria. Signals from these gut microorganisms are sent throughout your body—they even interact with organisms in your skin. Researchers are now looking into how these interactions can help withawide variety of skin conditions, including dryness and poor collagen production. Normalizing your gut microflora has been shown to help against skin irritations and chronic skin problems like eczema and psoriasis. The bacterial cells living in and on your body outnumber human cells by 10 to 1. Even after you wash, there are still 1 million bacteria living on every square centimeter of your skin. Far from being your enemy, these microorganisms are essential for optimal health and radiant skin. The bacteria on your inner elbow, for instance, process the raw fats it produces, which helps moisturize your skin. Optimizing your gut bacteria has even been shown to produce clearer, acne-free skin. If you do not regularly consume fermented foods, thenahigh quality probiotics is definitely recommended.
3.Avoiding sugars, fructose, grains, and processed foods: This is perhaps the most important step you can take to improve your overall skin health regardless of the season. If you eliminate all sugars, fructose and grains from your diet forafew weeks there you would likely notice rapid improvement in your complexion. Processed foods, trans fats, processed table salt, and pasteurized dairy products can also haveadetrimental impact on your skin. Avoiding these foods will improve insulin sensitivity, which is important for overall health, including your heart health. Interestingly, recent research shows that the perceived age ofawoman’s face, based on wrinkle measurements and complexion can help predict her risk for high blood pressure and heart disease. Those who looked more youthful, with fewer wrinkles, also had lower blood pressure and reduced risk for heart disease.
1.Dry brush your skin prior to getting wet usingabody brush. This will help get rid of loose flaky skin
2. Avoid using soap or use the least amount possible, especially in the winter or in dry climates, as that will tend to worsen your dry skin
3.Instead, applyanatural body scrub to exfoliate your skin (also apply this to your skin before getting wet, and choose one that also contains oil to moisturize)
4.Hot showers can worsen dry skin so take the coldest shower you can tolerate
5.After your shower, applyaheavy natural body butter or natural moisturizing oil (not mineral oil or baby oil) to help seal in moisture. As mentioned earlier, organic coconut oil is an ideal choice
1.Coconut Oil—Nature’s Perfect Moisturizer
organic moisturizer can help you achieveaclear and radiant complexion.
2.Egg yolk paste
These days’ people consume egg if they don’t find anything to consume. Rather, some people like egg and consumes it onadaily basis. Getting eggs in your refrigerator will be quite easy. You need to take out one egg, break it and pour it inasmall container. You can easily see yellow color egg yolk in the middle of while liquid. Slowly take out the yolk from the container without leaking it. Now, makeaface pack with egg yolk, 1 teaspoon of honey andateaspoon of milk powder. Mix the ingredients well and apply it over your face evenly leaving eyes and lips. Keep the paste for 20 minutes and wash with simple tap water.
The golden term, ‘Aloe Vera’ is now used in all spheres when it comes to beauty and health benefits. You need to take out the gel from Aloe Vera plant and apply it over your face foraperiod of 30 minutes. You might get many products in the market which deems to include Aloe Vera gel extract. But, it will be more effective if you can use natural gel directly extracted from aloe Vera leaf rather than cosmetic product. You need to sliceapiece of Aloe Vera, squeeze gel and apply it evenly on your face. It acts asawonderful moisturizer. But along with beingamoisturizer it protects your skin from getting impurities. Your skin will look soft and vibrant even during winter season.
Take the ripe papaya and ripe banana mesh and mix them well. Apply this paste all over the dry skin.
7.Fresh Cold milk
People use the heated form of milk in variety of preparations, even the cold milk is used in many places. But, the fresh cold milk is really very effective remedy to stay away from winter dry skin. You don’t at all need to heat up the milk, the only thing that you need to do is get the fresh cold milk and apply gently over your body covering the skin. Apply it over your skin and keep it for 10 minutes. There after wash your skin with the Luke warm water.
Carrot is very well known vegetable that has variety of health benefits. The skin experts are including the carrot juice extract in their products in order to boost their performance. This carrot juice can be used in natural way without any addition of chemicals and cosmetics to heal your dry or cracked skin during the winter season. Since carrot is filled with vitamin A, your skin easily getsaglow with its application. You can also add2spoon of carrot juice with milk cream and mix them really well. Now apply them over your skin especially those parts that ate exposed. You can soon see good result of your skin.
Ina2001 study that explored the topical benefits of astaxanthin, hairless mice were exposed to UVB radiation for 18 weeks to simulate photo-aged skin. The mice that had astaxanthin applied to their skin developed fewer wrinkles compared to the control group, and had younger-appearing collagen. In fact, the collagen of the astaxanthin mice looked as if it had never been exposed to UV radiation. The researchers concluded that astaxanthin “can significantly prevent UV-induced collagen degradation, wrinkles, lipid peroxidation, sunburn, phototoxicity and photoallergy.” It also reduced freckles and age spots.